Yugyan Daily » के हो एपेन्डिसाइटिस ?
१९ आश्विन २०७७, सोमबार || 05 Oct 2020, Monday
एपेन्डिक्सबाट कसरी बच्ने ?
के हो एपेन्डिसाइटिस ?
शरीरमा एपेन्डिक्स नामक एक अंग हुन्छ । अपेन्डिक्स एक पातलो र छोटो ट्युब हो जसको लम्बाइ लगभग २ देखि ३ इन्चको हुने गर्छ । सोही एपेन्डिक्समा हुने एक दुखाइलाई नै एपेन्डिसाइटिस भन्ने गरिन्छ ।
यो समस्याको सुरुवाती चरणमा पेटको बीच भागमा पटकपटक दुखाइ हुने गर्छ । केही घण्टामा नै पेटको दाहिने तल्लो भागतर्फ दुख्न थाल्छ । जहाँ एपेन्डिक्सको समस्या हुन्छ । त्यतिबेला पेटको दुखाइ गम्भीर बन्दै जान्छ । यस्तो दुखाइ हिँड्दा वा खोक्दा झनै बढी हुने गर्छ ।
एपेन्डिसाइटिसको बेलामा भोक कम लाग्ने, रातो आँखा हुने जस्ता समस्या देख्न सकिन्छ । एपेन्डिसाइटिस दुई प्रकारको हुन्छ ।
१ तीव्र वा एक्युट एपेन्डिसाइटिस
२ क्रोनिक वा स्थायी एपेन्डिसाइटिस
एक्युट एपेन्डिक्स तीव्र गतिमा विकास हुने गर्छ भने क्रोनिक एपेन्डिक्स लामो समयसम्म बनिरहन्छ । यदि कोही एपेन्डिक्सबाट ग्रस्त छ भने उसको पेटबाट जति सक्दो छिटो सर्जरी गरेर त्यसलाई निकालिदिनुपर्छ । यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई एपेन्डिक्स हुने सम्भावना छ र त्यसको उपचार छैन भने त्यस्तो अवस्थामा अप्रेसनको विकल्प नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
के हो एक्युट र क्रोनिक अपेन्डिसाइटिस ?
१. एक्युट एपेन्डिसाइटिस
एक्युट अर्थात् तीव्र । यसले आफ्नो नाम जस्तै शरीरमा तीव्र रूपमा विकास हुन्छ । सामान्यतया यो केही घण्टा वा दिनमा नै विकास हुने गर्छ । सामान्यतः यो केही घण्टा या केही दिनमा नै विकास हुने खालको हुन्छ । यसको तुरुन्त उपचारको लागि सर्जरीको आवश्यकता पर्छ ।
२ क्रोनिक एपेन्डिसाइटिस
यसमा दुखाइ लामो समयसम्म रहन्छ । एपेन्डिसाइटिसको मामलामा समग्र एपेन्डिसाइट्सको तुलनामा केवल १.५ प्रतिशतसम्म मात्रै हुने गर्छ । क्रोनिक एपेन्डिसाइटिस थोरै थोरै गरेर जम्मा हुने गर्छ । यही नै दुखाइको कारण बन्ने गर्छ ।
यसको सुरुवाती संकेत र लक्षण अक्सर धेरै हल्का हुन्छ । जसमा पेटको समस्या, भोक कम लाग्नु आदि लक्षणहरू देख्ने गरिन्छ । त्यसपछि बिस्तारै यसको दुखाइ बढ्दै जान्छ ।
रोगीलाई दुखाइको यकिन ठाउँ बताउन नै मुस्किल हुन्छ ।
–नाभी वा पेटको माथिल्लो भागमा हल्का दुखाइ हुनु र त्यो बिस्तारै तल्लो भागको दायाँतर्फ दुखाइ बढ्दै जानु ।
–शरीरमा दुखाइ सुरु भएपछि वान्ता हुनु
–९९ देखि १०२ डिग्रीसम्मको ज्वरो
– पेटको माथिल्लो भाग र तल्लो हिस्सा या मलाशयमा हल्का या तीव्र दुखाइ हुनु
– पिसाब गर्न समस्या हुनु
– पेटमा ऐठन हुनु
सामान्य हिसाबले बुझ्दा एपेन्डिक्स तब मात्रै विकास हुन्छ जतिबेला ‘सिकम’ नामक पेटभित्रको एउटा थैलीमा विकार भरिँदै जान्छ ।
एपेन्डिसाइटिसका धेरै कारणहरूले हुनसक्छ, यद्यपि केही विशेष रूपमा स्थापित गरिएको छैन । तीमध्ये केही कारण यस्ता छन् ।
–शरीरमा संक्रमण हुँदा सो थैलीको भित्तामा एक फुलेको भाग
–एपेन्डिसियल लुमेनमने क्लजिङ यस स्थितिलाई बढाउन सक्छ ।
–पेटमा हुने चोट पनि यसको कारण हो ।
एपेन्डिक्सबाट बच्नका लागि नियमित स्वास्थ्य जाँचका अलावा कुनै पनि विकल्प छैन । यसकारण आफ्नो शरीरको सबै अंगको स्थिति पत्ता लगाउनको लागि यसको जाँच अनिवार्य हुने गर्छ ।
एपेन्डिसाइटिसको उपचार एक आपतकालीन चिकित्सा हो । यस्ता बिरामीले तत्काल प्रभावकारी उपचार पाएनन् भने रोगीको ज्यान नै जान सक्छ । त्यसैले यसको लागि प्राकृतिक उपचारमा भर पर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, असुविधाको क्षणमा केही उपचार पद्धति पनि काममा आउन सक्छ ।
यस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू एपेन्डिक्स तयार भइसकेपछि रोक्न भन्दा पनि यसको विकास प्रक्रियामा नै अवरोध सिर्जना गर्न बढी महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
जस्तो, अदुवा, लसुन, मेथीको दाना, ताजा निम्बु, तुलसी, तरकारीको जुस, पानी आदिको प्रयोगले एपेन्डिसाइटिसलाई न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्छ ।
समलैङ्गिकता हुन सक्छ माइग्रेनको मुख्य कारण ?
नयाँ अनुसन्धानले के भन्छ ?
देशैभर खुले पर्यटकीय गतिविधि, घुमघाममा भने अझै अन्यौल
घुमघाममा अन्यौल कायमै
पन्जाबविरुद्ध चेन्नाई १० विकेटले विजयी
चेन्नाइको जितमा ओपनरद्वय शेन वाटसन र फाप डु प्लेसिसले १८१ रनको साझेदारी गरे
स्थानीय वासिन्दाद्वारा पशुपति क्षेत्रमा आन्दोलन घोषणा
विरोधका कार्यक्रममा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरिने संयोजक संगतले जानकारी दिए
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह : जहाँ छौं, त्यही दशैं मनाऔं
२२५३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
उपत्यकाका १५९९ जना
सेती नदीको कटान रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला
१२३ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने रंगशाला १८ हजार प्याराफिट क्षमताको हुने छ भने ७ वटा पिच बन्ने डीपीआर प्रतिवेदनमा छ
राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् ट्रम्पको स्वास्थ्यलाभको कामना
प्रधानमन्त्रीका तीन सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र ६७ सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण